सरकारको बेवास्ताले मणिपाल घटना
रामकृष्ण ज्ञवाली print
यो साता नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकको चर्चा खूब चल्यो। घटना मानवीय संवेदनासँग जोडिएको हुनाले पनि यसले आम सर्वसाधारणको ध्यान तान्नु स्वाभाविकै हो। दुर्गम हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा बस दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएकालाई जति सक्दो चाँडो उपचारको आवश्यकता थियो। त्यसैले उनीहरूलाई हेलिकप्टरबाट सिधै मनिपाल अस्तालमा उतारियो। स्ट्रेचरबाट बिरामीलाई इमरजेन्सी वार्डमा लैजान नपाउँदै मणिपाल प्रशासनले उपचार गर्न नसक्ने बतायो। कारण भन्यो, डाक्टर आन्दोलनमा छन्, उनीहरूबिना उपचार असम्भव छ।
यो अक्षम्य गल्ती हो, मणिपाल प्रशासन र चिकित्सकहरूको। युद्धमा पनि दुश्मनको सेना घाइते अवस्थामा फेला पर्यो भने उपचार गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ। हजारौं नजिर दिन सकिन्छ, जहाँ चिकित्सकले विपत्ति बेला भगवानले जस्तै गरेका कामको। तर, मणिपालका डाक्टर र अस्पताल प्रशासनले गम्भीर भुल गरे। एक मुठी सास लिएर बाँच्ने आशासहित अस्पतालको प्रांगणमा उत्रेका बिरामीलाई सायद यसो भने होलान् आन्दोलित चिकित्सकले, ‘हाम्रो माग पूरा भएको छैन, काममा फर्कन सकिँदैन।’
त्यहाँ विशेषज्ञता हासिल गरेका आवासीय प्राध्यापक डाक्टर पनि छन्। उनीहरूले सोचे होलान्, ‘आज शनिबार हो, हाम्रो बिदा छ, काम गर्न सकिँदैन।’ अनि मणिपाल प्रशासनले मनमनै सोच्यो होला, सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकलाई दबाब दिने मौका यही हो।
एउटा मान्छेको जीवनको मूल्य कति हुन्छ भन्ने हेक्का पक्कै पनि यी महाशयहरूलाई हुनुपर्ने थियो। अस्पतालहरू कुनै बुचरखाना होइनन्, जहाँ आफ्नो मर्जीले काम गर्न पाइयोस्। यो अन्य व्यवसाय जस्तो व्यवसाय पनि होइन, जहाँ नाफा र घाटाको मात्रै तुलना गर्न मिलोस्। यो त यस्तो पवित्र पेसा, व्यवसाय हो, जससँग जीवन जोडिएको छ। एउटा सानो कमीले पनि अमूल्य जीवन नष्ट हुन सक्छ जुन जतिसुकै मूल्य तिरे पनि प्राप्त हुन सक्दैन। धन्न हेलिकप्टरबाट मणिपालमा उतारिएकामध्ये कसैको ज्यान गएन। गएको भए त्यसको जिम्मेवार को हुन्थ्यो? त्यसैले मणिपाल प्रशासन र त्यहाँ कार्यरत हुन् वा आन्दोलनरत चिकित्सक, उनीहरूले अक्षम्य गल्ती गरेकै हुन्।
यसै अपराधलाई टेकेर स्वास्थ्य मन्त्रीका विद्वान सल्लाहकारले मणिपाल शिक्षण अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत दोषी चिकित्सकलाई लाइसेन्स र दर्ता खारेजीसम्मको सल्लाह दिएछन्। बडो अचम्मको सल्लाह हो यो। सस्तो लोकप्रियता पाउन र वाहवाही लुट्नका यस्तो सल्लाह दिइएको हुनुपर्छ। हाम्रा मन्त्री र नेता पनि सस्तो लोकप्रियताका पछाडि लाग्छन् नै। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा पनि प्रशंसाका भोका व्यक्ति हुन्। उनले पनि सल्लाहकारको सुझावलाई शिरोपर गर्दै खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्छन्। यसो गरियो भने यो घटना पोखराका लागि मात्र होइन, नेपालकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
मणिपाल शिक्षण अस्पताल आफैंमा एउटा संस्था हो। यो संस्था पर्यटकीय सहर पोखराको मात्र होइन, देशकै सम्पत्ति हो। यो संस्था जति व्यवस्थित र विकसित बन्छ, त्यति यही देशका लागि फाइदाजनक हुन्छ। हामीले हेक्का राख्नुपर्छ संस्थाले गल्ती गर्दैन। गल्ती गर्छन् त त्यो संस्था चलाउने जिम्मेवार व्यक्तिले। मणिपाल अस्पताललाई यो अवस्थामा पुर्याउनुका दोषी को को हुन्? यसको खोजी हुनुपर्छ र उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। दावाका भन्न सकिन्छ, यो अस्पताललाई अस्तव्यस्त बनाउने मुख्य दोषीमध्ये नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि एक हो। त्यस्तै अर्को मुख्य दोषी हो, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय। तेस्रोमा गृह प्रशासन र त्यसपछि बल्ल चिकित्सक र अस्पताल व्यवस्थापन दोषी हुन्।
मणिपाल प्रशासन र त्यहाँका चिकित्सकको असमझदारीका कारण अस्पताल पटकपटक बन्द भएको छ। कयौंपटक त्यहाँ भर्ना भएका बिरामीलाई अक्सिजनका मास्क र स्लाइन पानीको बोटल झुण्ड्याउँदै अर्को अस्पताल खोज्दै हिँड्न बाध्य पारिएको छ। त्यहाँ अध्ययनरत सयौं विद्यार्थीको पढाइ पटकपटक अवरुद्ध भएको छ। अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने बिरामी र प्राध्यापक नहुँदा लाखौं रुपैयाँ तिरेर पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई परेको असर कसले मूल्यांकन गर्ने? यो वर्षौदेखिको रोग हो, जुन समय समयमा बल्झिरहेको छ।
यसपटक पनि त्यहाँका चिकित्सकले आन्दोलन गरेको झण्डै साढे २ महिना भइसकेको थियो। अस्ति पो हेलिकप्टरमा ल्याइएका दुर्घटनाका बिरामीले उपचार पाएनन्। त्यो कुरालाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण समाचार बनाए र सबैले थाहा पाए। त्यस दिनभन्दा अघि त्यस्ता कति बिरामी त्यहाँ पुगेर फर्के होलान्? कुनै हिसाबकिताब छैन। दुर्गम गाउँबाट डोला वा डोकोमा बोकाएर मोटरबाटोसम्म र त्यसपछि ट्याक्टर, ट्रक वा बसमा हल्लाउँदै मणिपालसम्म पुर्याइएका विपन्न वर्गका कति बिरामीले त्यहाँबाट फर्कनु पर्दा ज्यान गुमाए होलान्? यसको जिम्मेवार को?
के मणिपाल अस्पताल बन्द भएको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर थियो, थिएन। सञ्चार माध्यमले समाचार लेखेकै थिए। त्यहाँको पठनपाठन अवरुद्ध भएको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय पनि जानकार थियो। दुवै मन्त्रालयमा औपचारिक र अनौपचारिक ढंगले मणिपाल प्रशासन र आन्दोलनरत पक्षले उजुरी पुर्याएकै थिए। तर वास्ता गरिएन। स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै मन्त्रालयले बेलैमा ध्यान नदिँदा यो दुर्घटना निम्तिएको हो। अहिले आएर छानबिन गर्ने र लाइसेन्स खारेजीसम्मको सुझाव दिने र लिनेहरूले पहिले यस्तै एक्सन लिन किन सकेनन्? यो सबैको गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा हो। त्यसैले मणिपाल प्रशासन, चिकित्सक र सरकारी जिम्मेवार अधिकारी पनि दोषी छन्, यस्ता प्रकरणमा।
हो, मणिपाल काण्ड एउटा गम्भीर घटना हो। यसका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, ताकि आगामी दिनमा यस्ता अक्षम्य गल्ती गर्ने दुस्साहस कसैले नगरोस्। तर कारबाहीका नाममा यो शिक्षण अस्पतालको लाइसेन्स खारेज गर्ने गल्ती गर्नु हुन्न। यो नेपालको सम्पत्ति हो। पोखराको शान हो। हरेक वर्ष १ सय हाराहारीमा दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्ने यो संस्था नेपालका लागि वैदेशिक लगानी पनि हो। नेपाली चिकित्सकको आन्दोलनको बहानामा अस्पताल बन्द हुनु र यसैलाई कारण देखाएर लाइसेन्स खारेज गरिने हो भने नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने छन्। यो पक्षलाई आँखा चिम्लिन मिल्दैन।
गाडी आफैं चल्दैन, ड्राइभरले चलाउँछ। कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन्छ, त्यस बेला लापरवाहीपूर्वक चलाएर दुर्घटना निम्त्याउने ड्राइभरलाई कारबाही गरिन्छ। हो, यस्तै नियम मणिपालको हकमा पनि लागू हुन्छ। माग पूरा भएन भनेर औषधोपचार गर्न नजाने नेपाली चिकित्सक, मान्छेको ज्यानभन्दा आफ्नो विदा महत्वपूर्ण ठान्ने आवासीय प्राध्यापक, उनीहरूलाई काममा लगाउन नसक्ने मणिपाल व्यवस्थापन पक्ष र बेलैमा एक्सन लिन ढिलाई गर्ने नेपाल सरकार दोषी हुन्।
कसले कति कति गल्ती गरेका छन्, हिसाब गरेर सोही बराबर कारबाही गरिपाऊँ। मणिपालको लाइसेन्स रद्द गर्ने धम्की नदिऊँ। कतै सुन्नु भएको छ, दुर्घटनामा परेको गाडी कारबाहीमा परेको!
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख १८, २०७४ १४:२५:५४